Macluumaadka Caadiga ah ee Shiinaha ee warshadda loo yaqaan 'Screw' iyo alaab-qeybiyeyaasha | Tanso
Waqtiga xaadirka ah, qalabka sida caadiga ah loo adeegsado ee Shiinaha waa 45 bir, 40Cr, steel ammoniated, 38CrMoAl, aluminium heerkul sare leh, iwm.
1) No 45 45 steel waa mid raqiis ah oona shaqeynaya howsha wanaagsan, laakiin iska caabinta, iska caabinta isbadalada iyo adkeysiga gabowga ayaa liita.
Daaweynta kuleylka: Qufulka iyo qabowga hb220-270, dhimista sare ee hrc45-48.
2) Shaqada 40Cr way ka fiican tahay tan 45 steel, laakiin badanaa waxay ubaahantahay in lagu daboolo lakabka chromium si loo wanaajiyo awooda dabaysha loona xidho caabiga. Laakiin shuruudda lakabka saarista chromium waa ka sarreeyaa, lakabka wax lagu rito waa mid dhuuban oo aad u fudud in la xidho, aad u qaro weyn, way fududahay in laga baxo, laakiin ka dib markay dhacdo, waxay dardar gelisaa daxalka, kaas oo aan la isticmaalin.
Daaweynta kuleylka: hb220-270, chrome steel HRC> 55
3) Nitriding steel iyo 38CrMoAl waxay leeyihiin howlo dhameystiran oo aad u wanaagsan oo si ballaaran ayaa loo isticmaalaa. Guud ahaan, lakabka nitriinku waa 0.4-0.6mm. Laakiin xogaha noocan ah waxay u adkaysan karaan burburka hydrogen chloride iyagoo leh awood hoose iyo qiimo sare.
4) xogta superalloy-ta waxay ka sareysaa xogta kale. Xogta looma baahna in la faafiyo. Intooda badan waxaa lagu isticmaalaa mashiinka cayriinka ee aan halogen-ka ee mishiinka wax lagu duro. Xogta ayaa leh anti-oxidation, anti-corrosion iyo howlaha ka hortagga gabowga, iyo kuleylka hra55`60.
Qalabka mudista wuxuu ku shaqeeyaa heerkul sarreeya, cadaadis sareeya, torke farsamoon sare iyo jawiga xallinta sare muddo dheer. Waxyaabaha ugu horeeya ee ugu horeeya waxaa looga baahan yahay shuruudaha hawsha, iyo khasaaraha ka dhasha kala qaybsanaanta waa lama huraan. Guud ahaan, biinka ayaa dusha laga saaray si loo hagaajiyo adkaynta dusha sare, taas oo ah, in la wanaajiyo caabbinta wejiga. Si kastaba ha noqotee, haddii sababta xidhashada la dayaco, haddii xirashada aan la yareynin intii suurogal ah, nolosha hawlgalka mashiinka ayaa si weyn hoos loogu dhigi doonaa.
Waxyaabaha soo socdaa ayaa sharxaya sababaha xirashada xoqista iyo siyaabaha lagu yareyn karo xirashada
1. Balaastig kastaa wuxuu leeyahay raasamaal balaastik ah oo lagu cabbiro cabirka heerkulka. Heerkulka lagu farsameeyo foostada waa in loo xakameeyaa inuu u dhow yahay heerkulkaan. Balaastik weyn ayaa dhex galeysa foosto ku taal tuubada cuntada, waxayna marka ugu horeysa gaari doontaa qaybta quudinta, taas oo si aan macquul aheyn u muujin doonta isku dheelitirka qallalan. Markii balaastigani yihiin kuwo kuleyl la’aan ah oo dhalaalintuna aan sinnayn, way fududahay in la sameeyo darbiga gudaha ee foostada iyo guntinka dibedda ee daboolka. Sidoo kale, qaybta adkeynta iyo qaybta is-dhexgalka, haddii gobolka dhalaalayo ee balaastigga uu xumaado, waxay sidoo kale sameyneysaa xirashada sii kordheysa.
2. Xawaaraha waa in si sax ah loogu hagaajiyaa. Sababtoo ah balaastigga qaarkood ayaa lagu daraa wakiilo xoojiya, sida fiberka galaas, macdanaha ama kuwa kale ee buuxu. Kala-jabinta agabkan alaabooyinka biraha ka samaysan ee birta ah ayaa inta badan ka badan tan caagga balaastigga ah. Cirbadda balaastikada, haddii xawaaraha sare la isticmaalo, hagaajinta xoogga xiirida ee balaastigga ayaa sidoo kale xoojin doona fiiqannada sii ruxan ee u dhigma. Xarkaha fiilooyinka leh waxay leeyihiin dhammaadyo fiiqan waxayna xiraan awood dheeri ah. Marka macdanta aan-rasmiga ahayn ay ku soo booddo xawaare sare dusha sare ee birta, saamaynta xoqitaankoodu ma yara. Sidaa daraadeed, xawaaraha waa inaanu isku toosin.